गृहमन्त्री बादललाई रवीको सिधाकुराः ‘घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद अब मुलुकमा चल्दैन ! साँच्चै हो गृहमन्त्री ज्यु ?’ (भिडियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
गृहमन्त्री बादललाई रवीको सिधाकुराः ‘घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद अब मुलुकमा चल्दैन ! साँच्चै हो गृहमन्त्री ज्यु ?’ (भिडियो)
नवनियुत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले मन्त्री बनिसकेपछि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो । घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद अब यो मुलुकमा चल्दैन ।
Prevश्रीदेवीको पुनर्जन्म ! भाइरल हुँदै यी बालिकाको भिडियो
Nextप्रतिक्षाको घडी सकियो ! भन्दै बिध्या चापागाईंले ल्याइन साझा सबाल भन्दा राम्रो कार्यक्रम (भिडियो सहित)
नेपालगञ्जमा भोलिदेखि २५ गतेसम्म कʼर्फ्यू लगाउने निʼर्णय
पर्सामा कोरोना संक्रमित भा’गेमा सु’रक्षाकर्मीले गोली हा’ न्न सक्ने
एक करोड लगानीमा ‘साली कस्को भेनाको’ गरियो सुभ साइत …..
काठमाण्डौमा एकैचोटि २४ वटा शव ल्याउँदा विमानस्थलमा आफन्तको रु;वाबासी , हेर्नुहोस बिमानस्थलको भावुक दृष्य (भिडियो सहित)